खोइ त आइजीपी धिरजको धक्का ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
खोइ त आइजीपी धिरजको धक्का ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) धिरज प्रताप सिंहले कमाण्ड सम्हालेको १ महिना पुगेको छ । चुनौतीका बीचमा आइजीपी धिरजले कमाण्ड सम्हालेको १० दिनमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पहिलो चुनौती थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वानुमान गरिएको भन्दा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
आन्तरिक रस्साकस्सीबीच आइजीपीको नेतृत्व सम्हाल्ने सौभाग्य पाएका धिरजले पहिलोपटक एकसाथ भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा सफल रुपमा सम्हालेकोमा जस पाएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले समेत निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । नेतृत्व सम्हालेको पहिलो चुनौतीमा नै सफलता प्राप्त गरेकोमा धिरज खुशी नहुने कुरै भएन । तर, प्रतिपक्षी दलले प्रहरीमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन अझ नेपाली कांग्रेसको पक्षमा खुलेआम साथ र समर्थन दिएको भन्दै प्रहरीको आलोचना भएको छ । प्रहरीले एउटा दलको नेताको समर्थनमा गरेको कामले भने प्रहरी यसपटकको विवादमुक्त रहन सकेन् ।
आइजीपी नियुुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ । विवादका बीच धिरजले एक महिना नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । यो अवधिमा गरेका कामसहित भावी योजनाबारे जानकारी दिन उनले पत्रकारहरुलाई प्रधान कार्यालय बोलाएका थिए ।
औपचारिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन भनिएपनि उनी पत्रकारहरुमाझ अनौपचारिक रुपमा भन्दै प्रस्तुत भएका थिए । उनी एआइजी सहकुल थापा र रविन्द्र धानुकको बीचमा बसेर आफ्नो कार्यकालको पहिलो महिनाको अनुभव सुनाइरहेका थिए ।
उनले अनौपचारिक रुपमा भनिएपनि धक फुकाएर बोल्न सकिरहेका थिएनन् । हुन त धिरज धेरै नबोल्ने प्रहरी अधिकारीमध्येमा पर्छन् । तर, आइजीपी भएपछि उनले केही नयाँ योजना प्रस्तुत गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो कि भन्ने पत्रकारहरुको अनुमान थियो तर उनले खास त्यस्तो केही बताएनन् ।
आइजीपी सिंहले नेपाल सरकारले सुम्पिएको जिम्मेवारीमध्ये हालै एकै चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा नेपाल प्रहरीका
कर्मचारीहरूले देखाएको व्यावसायिकताप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा सिन्धुलीका एसपी बिमलराज कँडेलले गठबन्धनका कार्यकर्ता जसरी प्रस्तुत भएको विषयमा समेत पत्रकारहरुले प्रश्न उठाएका थिए । आइजीपी सिंहले त्यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र अव्यावसायिक कार्य भएकोबारे सूक्ष्मरुपमा विश्लेषण भइरहेको बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका दुर्बल पक्षलाई बिश्लेषण गरी कमजोरी देखिएमा सम्बन्धितलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
उनले आफ्नो भावी योजना खास त्यस्तो नभएको बताए । उनले प्रहरी संगठनको प्रमुख फेरिँदैमा प्राथमिकता नफेरिने भन्दै प्रहरी संगठनलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने बताए । उनले भने, ‘संगठन प्रमुख फेरिदैमा संगठनको प्राथमिकता फेरिदैन । शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुका साथै बस्तुनिष्ठ अपराध अनुसन्धान, मानवअधिकारको संरक्षण, जघन्य अपराधको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छु ।’
धिरजको ‘धक्कापूर्ण’ भावी योजना आउला कि ? भन्ने अपेक्षामा रहेका पत्रकारहरु चियापान गरेर फर्किए । धिरजले पत्रकारहरुसित चियापान भेटघाट गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो ।
उनले अन्तिममा भने, ‘म यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्नुभन्दा पनि सबै कामले पुष्टि गर्दै जान्छु । तपाईहरुले देखिहाल्नु हुनेछ ।’